Talaallii COVID-19 ijoollee umrii 5-11 tiif
Ilmi/intalti/keessan talaallii fudhachuu sodaataa/ttii? Ijoolleen keessan talaallii erga fudhataniin booda ni dhukkubsatuu ykn miidhaan dabalee irra ni gahaa? Ijoolleen keessan talaallii kana akka fudhataniif akkamitti qophaahuu qabdan? Viidiyoowwan kunniin odeeffannoo gaarii hawaasa keenyaaf akka kennan abdii qabna.
Viidiyoo Sahan Journal qopheesse, odeefannoon tuni maati fi ijoollee Hawaasa keenya keessa akka gargaaru abdi qabna.
Viidiyoo Sahan Journal qopheesse kana inshuraansii Ucare tu deeggare.